Fahatsiarovana Ny Tolona Fanoherana Ny Fanjanahantany Nataon’ilay Mpitarika Kongoley Patrice Lumumba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2014 15:57 GMT
Mpitari-tolona nitaky ny fahaleovantena Kongoley sy olom-boafidy voalohany ho praiminisitra tao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo (RDC) i Patrice Émery Lumumba. Maty nisy namono tamin'ny fomba mbola tsy mazava mandraka ankehitriny izy 53 taona lasa izay tamin'ny andron'ny 17 Janoary 1961.
Nesorina teo amin'ny fitondrana i Lumumba, izay olomangan'ny tolona manohitra ny fanjanahantany eto Afrika, satria nanohitra ny fisintahana nataon'ny faritany manankarena harena an-kibon'ny tany nataon'i Katanga izay notohanan'ny Belza. Ny mpandimby azy, Joseph-Desiré Mobutu, miaraka amin'ny andia-tafika miaraka amin'i Mobutu no nisambotra an'i Lumumba sy namono azy taoriana kelin'izany. Ny fahafatesany no teboka faratampon'ny savorovoro politika nitranga tao an-toerana izay fantatra amin'ny hoe Krizin'i Kongo.
Nanome voninahitra momba ny fitarihany tsy nisy tsikombakomba nandritra ny andro nitsingerenan'ny fahafatesany ny mpiserasera kongoley:
Nisy namono 53 taona androany i Patrice Lumumba. Mbola mizarazara ilay firenena sy faritra nimatesany sy nahafatesany.
Tamin'ity andro ity tamin'ny 1961, novonoina i Patrice Lumumba ka nanesorana tamin'i Kongo ny mahampanetsika goavana azy, maha-mpanao ny fanovana azy, ny fakana azy ho fitaratra fa izay tia an'i Afrika! dia Mahatsiaro isika!
53 taona lasa izay, novonoina i Patrice Lumumba sy ny namany roa. Cc @Survie @Billetsdafrique
Nopotopotehiny sy notapatapahiny ny vatany; dia nolevoniny tao anaty asidra. 53 taona taty aoriana, mbola tsy nanaiky ny (ratsy) vitany ihany ry zareo.
Niely an-tserasera ny taratasy farany nalefany ho an'ny vadiny Pauline nialoha ny nahafatesany. Navoakan'ny bilaogy iraisana Quartier Libres indray ilay taratasy, izay nanoratan'i Lumumba toy izao:
Na ho faty, na ho velona, afaka na mifonja noho ny baikon'ny mpanjanatany, tsy ny momba ahy no zava-dehibe.
Fa i Kongo, ny vahoakantsika mahantra izay novaina ho tranom-biby [voahosihosy] ny fahaleovantena. […] Hiara-dalana amin'ny Kongoley an-tapitrisany tsy hampitsahatra ny tolona mandra-pahatongan'ny andro tsy misy intsony ny mpanjanantany sy ny mpikarama an'adiny eto amin'ny firenena i Afrika, i Azia, ireo vahoaka afaka sy noafahana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Ho an'ny zanako izay ilaozako, ary mety tsy ho hitako intsony, tiako ny hilazana fa ny mahafinaritra ny hoavin'i Kongo ary miandry azy ireo, tahaka ny hiandrasany ny Kongoley tsirairay avy, ny manatontosa ny asa masin'ny fananganana indray ny fahaleovantenantsika sy ny fiandrianampirenentsika, satria raha tsy misy ny fahamendrehana dia tsy misy ny fahafahana, raha tsy misy ny rariny dia tsy misy ny fahamendrehana, ary raha tsy misy ny fahaleovantena dia tsy misy ny olona afaka.
Tao amin'ny gazetiboky CeaseFire i Georges Nzongola-Ntalaja, profesoran'ny fianarana momba ny Afrikana sy ny Afro-Amerikana ao amin'ny Oniversiten'i Carolina Avaratra, sy i Jonathan Jacobs, mpanoratra sady mpikatroka monina ao London, no nanazava ny halehiben'ny lova navelan'i Lumumba:
Araka ny tatitra tsy voamarina, i Walter Kansteiner – Sekreteram-Panjakan'i Etazonia Misahana ny Raharaha Afrikanandritra ny fotoana nitondran'i George W. Bush, tanelanelan'ny Jona 2001 ka hatramin'ny Novambra 2003 – no efa nandrafitra ny hizarana an'i Kongo ho firenena efatra. Ny fanamarinana amin'izany fampizarazarana izany dia noho ny velarantaniny, izay midadasika loatra sy tsy voafehy ara-panjakana. […] Ny marina dia izay no mora hahazoana ny lohananon-karena, sy hahamora ny fanondranana azy mivoaka mankeny an-tsena. […] Ny marina dia ho tafintohina hatrany ny paikan-dry zareo hanjanaka indray an'i Kongo manoloana ny fikirizan'ny vahoaka kongoley hiaro ny mahairay azy, ny vako-pireneny, ary hiaro ny tsi-fizarazazan'ny tanindrazany. Ny lova nalelan'i Patrice Lumumba, Pierre Lulele, André Kisase Ngandu ary ireo maritiora maro hafa no mitarika ny vehivavy,ny lehilahy ary ny ankizy hihiaka ny «Tsia» amin'ny fampizarazarana sy ny «Eny» amin'ny «Kongo Tafaray, firenena iray matanjaka.”